Diyaarad Sidday Cayaartoy oo Burburtay + [Sawiro] – Xeernews24
29. November 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Saraakiisha dalka Colombia ayaa sheegay in shan qof oo kaliyaay ka badbaaday diyaarad ay saarnaayeen 81 qof oo sidday koox kubadda cagta oo ka dhisan dalka Brazil, taasi oo dhacday iyada oo kusii jeeda garoonka diyaaradaha caalamiga ah Medellin.
„Waa musiibo xaddigeedu weyn yahay” Waxaa sidaas yidhi duqa magaalada Medellin Federico Gutierrez Gutierrez oo la hadlay Blu Radio, xilli uu kusii jeeday goobta ay diyaaradda ku dhacday.
Xidhiidhka kubadda cagta ee Koonfur America ayaa kadib shilkan diyaaradeed joojiyey dhammaan dhaqdhaqaaqyadii cayaareed illaa inta dib looga soo sheegayo.
Imisa Dumar Ah Ayuu Qabay Hogaamiyihii Cuba Fidel Castro? Liiska Magacyada Xildhibaanada Somaliland Ku Meteli Doona Aqalka Sare Ee So...